Nyowani malware inobata DNS yakawanikwa: OSX / MAMi | Ndinobva mac
OSX / MAMi, iri malware nyowani yakawanikwa naPatrick Wardle, kubva kuObjective-Ona, umo kuitiswa kwayo muhurongwa hwekushanda hweMacOS kunotendera mapato echitatu kuchengeta iyo DNS yekomputa yedu. Chokwadi ndechekuti malware kuwana maMacs hazvizivikanwe, asi sezvo isina kusainwa neanogadzira, macOS pachayo inofanirwa kuiramba pasina rimwe dambudziko kunze kwekunge mushandisi chaiye aipa kuti iise.
Sezvazviri muzviitiko zvakawanda zveaya anoonekwa malware, kana isu tiri vashandisi vane basa nezvivakwa zvedu isu hatifanire kunge tine dambudziko rakakura, asi zvokwadi, Unogona kugara uchinyangira chimwe chinhu chausingade paMac.
Kune avo vasingazive chinonzi DNS chii, tinogona kutaura nenzira yakapfupika uye yakapusa iyo DNS inomiririra Domain Name System uye itekinoroji yakavakirwa pane dhatabhesi iyo inoshanda kuti izive iyo IP kero yemuchina uko iyo domain yatinoda kuwana inogarwa. Iyo kupihwa kweiyo IP kero inoshandurwa nemadomains uye DNS.
Nyaya yakakosha yekuvanzika
Pamwechete, kuwana iyo DNS kunogona kuva dambudziko kunyangwe edu mapassword, marekodhi kana data rakakosha remakomputa, uye ndezvekuti vanogona kusvikwa nekutsiva chitupa mumidzi yesystem kana isu tikakanganiswa neiyi malware. Kana iwe uri mumwe wevaya vanoisa mapurogiramu kazhinji, iwe unogona kuita bvunzo kuti uone kana komputa yako iri kukanganiswa kana kwete. Parizvino hapana sarudzo dzekutsvaga malware saka isu tinofanirwa kungwarira nezvatinoisa pakombuta yedu kana tisingade kuve panjodzi nekurwiswa uku uye nemamwe marudzi emarware anotenderera pamapeji ewebhu, email, kusaina kunyorera, nezvimwe. …
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » Nyowani malware inobata DNS yakawanikwa: OSX / MAMi
HyperDrive 8 mu1, ndiyo chete hub iyo munhu wese anofanirwa kuve nayo